Ngokwezibalo, rhoqo ngonyaka kukho abaguli abanesifo se-1,2-1,8 sezigidi, ama-400000-800000 ukusweleka konyaka kunye ne-86,5% yokukhubazeka. Ngokwezibalo zabanye abafundi, phakathi kwabaguli abasindileyo, i-10% yabuyiselwa emsebenzini ngaphandle kokhubazeko olucacileyo, ama-40% asala nokukhubazeka kancinci, ama-40% afuna uncedo lwezixhobo ezikhethekileyo, kwaye i-10% yafuna ukhathalelo olukhethekileyo. Zonke iintlobo ze-hemiplegia ezibangelwa kukubetha zezona zinto zixhaphakileyo. Ukuba azinyangwa ngexesha, ezilula ziya kushiya ukhubazeko, olunokuba nefuthe elibi kubomi babo nasemsebenzini. Abasindayo abasayi kuba nakho ukubukhathalela ubomi babo, bangazihluphi nje ngokwabo, kodwa bathwele umthwalo omkhulu kwiintsapho zabo. Emva kokubuyiselwa kwimeko yesiqhelo, iipesenti ezingama-90 zabaguli abanesibindi banokuhamba kwakhona kwaye bazinyamekele, i-30% yabo inokuphinda ibuye emsebenzini. Kuyimfuneko ukwenza uqeqesho lokuhamba ngokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunyango. Ngenxa yokuxinana kwenkqubo ye-nervous central, nangona i-nerve ingenakukwazi ukuphinda ibuyele ngaphakathi, i-neripheral nerves yayo inokuhluma ngamasebe e-axon asemacaleni, enokuthi yenze izihlunu ezibambekayo ze-tiservated tisnes ziphinde zilawule, zihambise amandla angaphakathi omzimba, kwaye zikhuthaze ukuphindwaphindwa komsebenzi we-nerve. Ukongeza, ukuhamba ngoqeqesho lokubuyela kwimeko yesiqhelo kunokuvuselela inzondelelo yezigulana kwaye kukwenze bazithembe ngakumbi. Abahambahamba ikakhulu abanesiphene abanokuthi sibanikeze,
Ixesha lokuposa: Aprili-20-2019